Mee atụmatụ ime ụlọ nke oge a Ụlọ ime ụlọ Bucharest Constanta - Nobili Ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, imepụta, ahịa
Modern ime ime ụlọ - Chepụta kpochapụ ụdị ụlọ
N'ọtụfụfụ na-emepụta ihe ndị kachasị mma maka ime ụlọ nke Nobili Interior Design. Mgbe anyị na-arụ ọrụ mmepụta ihe, ndị na-emepụta anyị jiri nlezianya nyochaa echiche na mmetụta ndị ahịa ahụ kwupụtara. Ọrụ ime ihe ndị a na-esonụ bụ kaadị azụmahịa anyị, nke na-anọchi anya anyị karịa ihe ọ bụla e dere ede na okwu.
Ime ụlọ imepụta Constanta
Uwe ime ime ihe a bu Bucharest
Ime ụlọ ime ụlọ 3 Constanta ụlọ
Ime ụlọ ime ụlọ nke oge a
Imepụta ime ụlọ obibi mara mma
Imepụta ime ụlọ 4 n'ime ime ụlọ nke oge a
Ime ụlọ ime ụlọ 4 dị n'ime ụlọ
Ime ime ime ụlọ 3
Mgbe ị na-arụ ụlọ, ọ dị mkpa ichebara echiche banyere ịmepụta oghere niile iji nweta nkasi obi kachasị na obere oghere. Tụkwasị na nke ahụ, ime ime ụlọ kwesịrị ịdị n'otu ma n'otu oge arụ ọrụ na nke dị jụụ. N'ihi nke a, a ga-emezu atụmatụ nke imewe ime ụlọ 3 ma ọ bụ 3. Ị nwere ike ịlele ịrụ ọrụ ime ụlọ nke ụlọ ọrụ anyị mere maka ụlọ ndị a mara mma, ụlọ nke oge a na Constanta, Bucharest, Brasov, Ploiesti. Ebumnuche nke ime ụlọ nwere ike ime site na ndị mmepụta na ndị ọkachamara n'ime ime ụlọ. Ihe kachasị mkpa bụ ka ị ghara ileghara nkọwa kachasị nta nke na-eme ka ọdịiche dị n'etiti imewe ime ụlọ na-aga nke ọma na ịrụ ọrụ ime atụmatụ. Ime atụmatụ ime ụlọ nke ime ụlọ na-adabere n'ogo buru ibu na nha na ohere nke oghere dị ndụ. Ụlọ abụọ ma ọ bụ atọ dị n'ime ụlọ na-arụ ọrụ dị iche iche. Dị ka a na-achị, a na-achọ ụlọ ahụ mma na agba agba iji hụ na ụlọ ahụ dị elu. Ọnụnọ nke ụlọ ihi ụra abụọ n'ime ụlọ ahụ na-enye ohere maka nzukọ kachasị mfe nke akụkụ ọrụ ndị dị mkpa. A na-ekenyekarị ọnụ ụlọ n'ime ime ụlọ ahụ na ebe ndị ọzọ maka ime ụlọ. Site n'ụzọ, a ga-ejikọta ọnụ ụlọ ahụ na ọfịs n'ihi na ọ anaghị etinye ohere dị ukwuu. Ndị nwere ụlọ atọ dị atọ nwere ezigbo obi ụtọ, n'ihi na ha nwere ike ịchọta echiche ọ bụla banyere ime ụlọ. Ebe dị ndụ na-enye gị ohere ichota ụlọ ahụ na arịa ụlọ, ngwa na ihe ndị ọzọ dị n'ime ụlọ mgbe ị na-akwanyere echiche nke a chọrọ. A pụrụ imepụta ụlọ ọ bụla dị iche iche ma ọ bụ anyị nwere ike ịhazi ụlọ ahụ n'otu ụdị. N'ime ụlọ atọ dị na nke oge ochie, ụlọ nzukọ ndị ahụ dị oke nkè, ma nsogbu a nwere ike iwepụ anya ihu site na iji ihe na-emecha na ihe ndị eji achọ mma. Indifernet ị nwere ụlọ na Galati, Braila, Tulcea ma ọ bụ na Bacau, Suceava, Iasi, Buzau anyị nwere echiche na ngwọta dị mma maka ụdị ejiji ọ bụla nke onye ahịa ahụ kwetara. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ọrụ nhazi imepụta onwe onye na ọnụahịa biko gaa na ngalaba Ọrụ imepụta ime ụlọ .
Ụdị ọrụ ime ụlọ ime ụlọ